त्यसैले AirPods 3, यसको डिजाइन र सुविधाहरू छन् आईफोन समाचार
त्यसैले AirPods 3, यसको डिजाइन र सुविधाहरू छन्
एयरपड्स। ती उत्पादनहरू हुन् जसको चीजहरू अफवाह गरिएको छ जबबाट मलाई थाहा छैन ... तर दिनको अन्त्यमा हामी समाचारको खुट्टामा हुनुपर्दछ ताकि तपाईं सबै समाचारहरूको बारेमा अन्तिम क्षणसम्म सूचित हुन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया एप्पल संसारलाई घेर्दछ, साथै आज हामीले एयरपड्स about को बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ।
हामीले भर्खर एउटा उपन्यास डिजाइनको पहिलो संकेतहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं, नयाँ एयरपड्स completely पूर्ण रूपमा चुहाइएको छ, अफवाहको डिजाइन र उनीहरूका धेरै सुविधाहरूको पुष्टि गर्दछ। यदि तपाईं नयाँ एयरपडहरू खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, केहि हप्ता प्रतीक्षा गर्नुहोस्, नयाँ पुस्ता अझ चाखलाग्दो हुन सक्छ।
पहिले जस्तो भएको छ, चुहावट एशियाली पोर्टलको हातबाट आउँदछ A२ अडियोयसमा अचम्म मान्नुपर्दैन, चीन त्यहीं निर्मित छ र उनीहरूले यस प्रकारको 'इनसाइडर' जानकारीमा पहुँच गर्न सक्ने सम्भावना छ। यी छविहरूमा हामी देख्न सक्छौं कि तेस्रो जेनरेशन एयरपडहरूले निश्चित रूपमा कसरी देखेका छन् कि "कुना" कसरी घटाइएको छ, के तिनीहरू मूल बजार मा अग्रणी डिजाइन बने र स्पष्ट नक्कलको बावजुद मूल AirPods को प्रक्षेपण मा यति हँसी कारण? तिनीहरू पनि एयरपड्स प्रो को एक विशेष गुण प्राप्त गर्दछन् जसले सबैभन्दा क्लासिक, सिलिकॉन प्लगहरू दु: खी गर्न सक्छन्, तिनीहरू अब बाह्य हेडफोन छैनन्।
सुविधाहरूको सर्तमा, ब्याट्रीले झण्डै उस्तै मापदण्डहरू समात्छ AirPods दोस्रो पुस्ता, जुन तपाईं आकार घटाउने विचार गर्दा खराब छैन। हामी पनि आगमन मा ध्यान केन्द्रित H2 चिप त्यो स्थानिक ध्वनि यी नयाँ AirPods गर्न र स्वचालित कनेक्टिभिटीको स्तरमा सुधार ल्याउँछ। यो स्पष्ट छैन कि त्यहाँ आवाज रद्द हुनेछ, तर म यसलाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्दछु कि तिनीहरू एयरपड्स प्रो मार्केट खानेछन् भन्ने विचार गरेर। हालको दोस्रो पुस्ताको एयरपड्सको साथ यसको मूल्य झन्डै १ 180० युरो हुनेछ, के तपाईं ती खरीद गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » हाम्रो बारेमा » त्यसैले AirPods 3, यसको डिजाइन र सुविधाहरू छन्
प्याड संग गम्भीर ??
केहि पनि गुमाए बिना WhatsApp मा मोबाइल नम्बर कसरी परिवर्तन गर्ने
IPadOS १.14.5. bet बिटाले स्प्यानिशलाई 'स्क्रिबल' लेखन विधिमा परिचय गराउँछ